पूर्वरानी कोमल शाह र पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा अस्पतालबाट डिस्चार्ज – Dainiki Online
14/05/2021 14/05/2021 adminLeaveaComment on पूर्वरानी कोमल शाह र पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा अस्पतालबाट डिस्चार्ज
काठमाडौँ — कोरोना संक्रमण भएपछि काठमाडौंको थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेशल अस्पतालमा उपचाररत पूर्वरानी कोमल शाह शुक्रबार डिस्चार्ज भएकी छन् ।
उनी अपराह्न ४ बजे अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी हुन् । उनीसँगै पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणा शाह समेत अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
कोरोना संक्रमण भइ २१ दिनअघि नर्भिक अस्पतालमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसहित उनीहरु भर्ना भएका थिए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह वैशाख २९ गते राति ८ बजे डिस्चार्ज भएका थियो । त्यसको २ दिनपछि पूर्वरानी र पूर्व अधिराजकुमारी समेत डिस्चार्ज भएका हुन् ।
अस्पताल आएदेखि नै पूर्वरानी कोमल शाहको अवस्था बिग्रिन थालेको थियो । उनलाई अक्सिजनको हाइफ्लो सपोर्टमा राखेर उपचार गरिएको थियो । अक्सिजन निरन्तर घटेपछि आईसियूमा राखेर समेत केही दिन उपचार गरिएको थियो । प्लाज्मा थेरापी विधिबाटसमेत उपचार गरिएको थियो । क्रमिक रुपमा सवास्थ्यमा सुधार भइरहेपछि उनलाई डिस्चार्ज गरिएको अस्पताले जनाएको छ ।
पूर्वराजा, पूर्वरानी र पूर्वअधिराजकुमारीको उपचारमा नर्भिक अस्पतालका सिनियर फिजिसियन तथा कार्डियोलोजिष्ट डा. जेपी जैसवाल र चेस्ट फिजिसियन डा. बी श्रीवास्तव नेतृत्वको टिम संलग्न रहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।
Tagged पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणापूर्वरानी कोमल शाह
१९ वर्षीया सपना रोका मगरलाई एक्कासी के भयो यस्तो ?